Kukhutshwa ios 14.2 yonjiniyela beta; zithetha ntoni ezo zibane ziorenji kunye nohlaza kwiscreen sam se-iphone?
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Kukhutshwa i-beta ye-iOS 14.2; zithetha ntoni ezo zibane ziorenji kunye nohlaza kwisikrini sam se-iPhone?
apile kutyhale i-iOS 14 izolo nje kwaye sele ikhuphe i-beta ye-iOS 14.2 kubaphuhlisi. Olona tshintsho silwaziyo kuphela lolo olushukumisayo uphawu lokuqonda umculo we-Shazam kwiZiko loLawulo lwe-iOS. Ungangena kwiziko usebenzisa ulawulo lomzimba. Slayida umnwe wakho ezantsi ukusuka ekunene kwesikrini ecaleni kwaye uza kubona iZiko loLawulo le-iOS.
I-Shazam yenye yeenkqubo zokuqala ezinikezelweyo kwiVenkile ye App kwaye xa yenziwe, imamela umculo odlala ngasemva, ngezithethi okanye ii-AirPods. Isihloko sengoma kunye nolwazi oluthe kratya malunga nayo luya kuvela kwisaziso. Ukucofa kwisaziso kuya kuvula ingoma kwi-Apple Music ukuba iyafumaneka. Nje ukuba uguqulelo lwe-beta yonjiniyela ye-iOS 14.2 ifakwe kwisixhobo somsebenzisi we-iPhone kunye nesicelo, kuya kufuneka aye kuseto kwaye aguqule ukhetho lwe-'Shazam 'oludweliswe phantsi' koLawulo oluthe kratya. ' Nje ukuba kwenziwe oko, iShazam iya kufumaneka kwiZiko loLawulo.
NgoDisemba 2017, U-Apple uthenge uShazam nge $ 400 yezigidi . Ngexesha lokufumana, uShazam wakhupha ingxelo ethi, 'Siyavuya ukwazisa ukuba uShazam ungene kwisivumelwano sokuba yinxalenye yeApple. I-Shazam yenye yezona zixhobo zibaluleke kakhulu kwihlabathi kwaye zithandwa ngamakhulu ezigidi zabasebenzisi kwaye asinakucinga ikhaya elingcono likaShazam ukuze sikwazi ukuqhubeka nokwenza izinto ezintsha kunye nokuhambisa imilingo kubasebenzisi bethu.
'Ukukhanya kweorenji okubonwe kwikona yale iPhone kuthetha ukuba enye yeapps kwifowuni isebenzisa imakrofoni yefowuni.
Sifuna ukujongana nento abaninzi abasebenzisi be-iPhone ebebuza ngayo namhlanje. Ngelixa usebenzisa i-iOS 14, usenokuba uqaphele iorenji okanye ichaphaza eliluhlaza ngaphezulu kwesikrini. Ukuba awuqinisekanga ukuba izibane zithetha ntoni, funda. Oko kuthetha ukuba kukho usetyenziso olusebenzisa ifowuni yakho & ikhamera yeapos okanye imakrofoni yayo (ngemvume yakho, kunjalo). Ukuba yikhamera yakho ye-iPhone & apos esetyenziswa yi-app, ukukhanya kuya kuba luhlaza. Ukuba imakrofoni yakho ye-iPhone kunye ne-apos yabelwana ngeapp, ukukhanya kuya kuba tyheli.
Ukuba u-apos uyazibuza ukuba yeyiphi usetyenziso olusebenzisa imakrofoni yakho yekhamera okanye ikhamera, ukuswayipha ezantsi kwiscreen kuya kutyhila igama lale app. Ndiyifumene? Kulungile.
Isamsung kunye neapos yefowuni entsha emxinwa ye-AT & T iza nebhetri esuswayo kunye nexabiso lempazamo